DAGAALKA KA DHANKA AH ON YAANYADA: DAAWEYNTA DAD - BEER CAGAARAN
Dhaqan wax ku ool ah oo dadweynaha ah ee dabaylo goor dambe ku tuntay yaanyada
Xagaaga oo dhan, dhammaan beeralayda waxay bilaabaan inay koraan miraha iyo khudradda ay jecelyihiin ee suuqyadooda, iyo intaa dheer oo ay maalin walba iyo caadadooda caadada u haystaan, waxay leeyihiin dhibaatooyin dheeraad ah si ay uga ilaaliyaan dalaggooda cuduro kala duwan. Intaa waxaa dheer, xitaa xagaaga kuleylka ah ayaa badanaa siiya isbedelka heerkulka iyo, natiijada, waxaa lagu xusay roobab badan oo culus, taas oo saameyn aad u xun ku leh caafimaadka dhirta qaar.
Mid ka mid ah kuwa ugu xanaaqsan uguna badan ee ka mid ah meelaha banaan ee cudurka, kuwaas oo weerara inta badan yaanyada, waa phytophthora (fitoftoroz). Oo maanta waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonaa sida loola tacaalo yaanyada laga bilaabo daawada phytophtoras ee dhulka furan ama aqalka dhirta lagu koriyo iyo waxa daaweynta dadku si fiican u isticmaalaan.
Phytophthora waa cudur halis ah ee dhirta beerta, wakiilka keena kaas oo ah fedraalka Phytophthora fungus. Tamaandho badanaa badanaa waxay la kulmaan fangaskaan, laakiin waxaa jiray xaalado caabuq iyo dalagyo sida strawberries iyo xitaa qajaarka. Waa sahlan tahay in la raadiyo calaamadaha khatarta leh ee khudaartaada: waa ku filan in lagu muujiyo daboolka yaanyada oo si tartiib ah u ballaarinaya meelaha dhibcood ee caarada sharoobada ah ee madow, oo kordha si aad u dhakhso badan xilliga hawada qoyan. "Cuntooyinka" noocan ah waxay bilaabaan inay ka muuqdaan caleemaha yaryar sida 3 maalmood ka dib marka infekshanka, ka dibna, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, waxay gacan ka geystaan ​​geerida dhamaystiran ee caleemaha. Intaa waxaa dheer, on afkoda waxaa suurtogal ah in la ogaado si tartiib ah ubaxyada grayish ah, iyo on miraha - dhibco qoyan iyo indirded madow, kaas oo sidoo kale tartiib tartiib ah ku faafi doonaa inta kale ee dusha dhirta.
Soo ogow sababta caleemaha u noqdaan huruud iyo lakab yaanyo, sida loola tacaalo kareemka sare iyo xayrta budada ah ee yaanyada.
Ma jiro qof caymis ah oo ka soo horjeeda dabayaaqadii dambe ee beerta, laakiin sababaha iyo xaaladaha qaarkood ayaa weli wax ka geysta dhacdada cudurkan:
cimilada qaboobta iyo roobabka badanaa;
ku guul daraysatay in ay u hoggaansamaan nidaamka heerkulka loo baahan yahay (ee lagu koriyo) ee yaanyada;
Yaanyada daboolka leh oo leh filim qabow inta lagu jiro isbeddelka heerkulka (maalin iyo habeen) wuxuu kor u qaadayaa samaynta kondensate, taas oo, markaa, waxay sii kicisaa horumarinta phytophthora.
Ma taqaanaa? Dunida ma ahan mid ka mid ah qaaradda oo aan xor ka aheyn cytofthora - 70 noocyada kala duwan ayaa si degan oo deg deg ah u burburin kara dhammaan dhirta dhaqameed ee la yaqaan.
Ilaa hadda, suuqa gudaha waxaa ku jira noocyo kala duwan oo kiimiko ah oo kala duwan oo la tacaalaya duufaanka dhibta leh markii ugu horreysay iyo muddo dheer dib u dhigista geerida lama huraanka ah ee warshadda, maadaama aysan suurtagal ahayn in si buuxda looga adkaado cudurka soo muuqday.
Hase yeeshee, sida ficilku u muujiyay, duufaanta goor dambe waa la iska ilaalin karaa - si loo sameeyo tan, waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin wax ku ool ah oo wax ku ool ah waqtigaas, kaas oo ka kooban qadiimadii hore, oo la xaqiijiyay in ka badan sannadihii hababka dadweynaha. Iyo si aad u ogaato sida dhabta ah ee qalabku ka caawin doono dagaalka lagaga hortagayo digaagada yaanyada meelaha furan ama koriyo, waxaan u jeednaa qodobbada soo socda.
Garlic iyo Manganese
Xalka guud ee caan ah ee kiriimiga kiriimiga ah ee la yiraahdo dhoobada ayaa muddo dheer ahaa qalabkii ugu wanaagsanaa ee looga hortagi lahaa weerarka fangas. Tiknoolajiyada diyaarinteeda waa mid aad u fudud, iyo hanti-maquuq-marinno wax ku ool ah ayaa ku soo badanaya waxtarkooda. Si aad u diyaariso xalka, waxaad u baahan tahay inaad marxaladda ku dhaqaaqdo:
In Booqday Furimaha Dagaalka hilibka, 100 garaam oo toon ah waa la duqeeyey, oo leh dhammaan qaybaheeda hal mar: caleemo, basasha iyo fallaadho.
Isku daridda toonta waxaa lagu shubay galaas biyo ah oo nadiif ah 24 saacadood heerkulka qolka, meel qallalan oo qabow.
Ka hor inta aan la isticmaalin dareenka joogtada ah ee lagu qasi jiray biyaha (10 litir).
Waa lagama maarmaan in la buufiyo yaanyada 2dii asbuucba mar ah oo ah jawi deggan oo qallalan.
Miraha iyo caleemaha on baadiyaha si gooni gooni ah ula dhaqmo xalka manganese diyaariyey sida ku xusan hoos ku xusan: 3 garaam oo budada ah halkii 10 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Haddii ay jirto halis ah in ay miraha ka soociso phytophtoras ka hor inta Buuxin buuxda, ka dibna way ka fiican tahay inaad soo qaado, qabato biyo (heerkulka - 35° S) oo leh qufac caloosha ilaa nus saac, ka dibna qalaji oo u oggolow inay u daadiyaan meel qalalan oo furan, tusaale ahaan, on windowsill ah.
Haddii aad dooratay faleebo dabacsan sida hub ka hortag ah oo ka soo horjeeda dabaysha, waxaa muhiim ah in la xasuusto in maaddada ugu muhiimsani ay tahay mid cayayaanka ah (hay ama caws). Cawsku wuxuu ku shubaa toban litir oo biyo ah, oo ah muggeed oo ah HOL ayaa lagu daraa isku dar ah, ka dibna waxaa loo rogaa saddex maalmood. Markaas tincture dhameystiran waxaa si fiican u sifeeyeen iyo dheeraad ku buufin leh yaanyada labadii toddobaadba mar.
Ma aha oo kaliya yaanyo, baradho, kaabaji iyo dalagyada beerta kale, laakiin sidoo kale xayeysiisyada waxaa ka mid ah phytophtorosis, iyo sidoo kale spatifilum, kalanchoe, violets, gloxinia, iyo azalea.
Wakhti dheer ayaa la ogaaday in dadka deegaan xagaaga la ogaaday waxtarkooda aan la qiyaasi karin ee ka soo horjeeda fangasta phytophthora: waxay ka kooban tahay filim khafiif ah oo aan ku filneyn oo ku saabsan caleemaha yaanyada oo ka hortagaya jeermiska waxyeelada leh ee ka soo baxaya unugyada qudaarta iyo xididdada ay ku jiraan.
Caabuqyada fungal ee noocyo kala duwan ayaa had iyo jeer isku dayaya inay "dhaafaan" dhirta lagu daaweeyo serum, maaddaama bakteeriyada caanaha iyo microflora ay ku jiraan waxyeelladooda. Laakiin habka waraabinta waa in lagu celiyaa, ma iloobin, tan iyo serum lafteedu waa mid gaaban oo si degdeg ah lumisay saameyntii antimicrobial. Qaar ka mid ah ilaha ayaa sheegaya in ay tahay qaabka buufinta 10-kii maalmood ee ugu waxtarka badan, laakiin ku salaysan waayo-aragnimada beeraleyda iyo beeralayda badan, waxaan ku soo gabagabeynay in macaamilka la sameeyo inta badan ee suurtagal ah, xataa maalin walba. Si kastaba ha ahaatee, si aad ugu codsato serum ujeedada loogu talo galay, waa in marka hore loo beddelo xal farsamo - waayo tan waxaa lagu qasi karaa biyaha 1: 1. Sidan oo kale, waxaa suurtogal ah in si nabadgelyo ah loola shaqeeyo yaanyada laga soo qaado phytophtoras-liidhada labadaba ee aqalka dhirta lagu koriyo iyo goobaha furan.
Caanaha iyo iodine
Mana yaabin dad badan beeralayda xirfadleyda ah yaanyadawaxaa loo tixgeliyaa ka hortagga ugu fiican laga bilaabo processing phytophthora dhirta leh xal caano iyo iodine, sababtoo ah guryaheeda jeermis-dilaha maaha oo kaliya dilida bakteeriyada cudur-keena, laakiin waxay kaloo gacan ka geysataa geeddi-socodka deg-degga ah oo tayo sare leh oo lagu kobcayo miraha yaanyada. Diyaarinta xalalka noocan oo kale ah waxay u baahan tahay nus koob oo caano ah, biyo nadiif ah iyo dhowr dhibcood oo iodine ah (oo aan lagu darin, waxay ku gubi kartaa caleemaha). Caanaha iyo iodine waxaa lagu daraa 1 litir oo biyo ah, ka dibna isku dar ah waa in si taxadar leh loo buufinayaa dhammaan meelaha aan la ilaalin.
Waa muhiim! Si wax ku oolnimada sare leh, processing yaanyo ka soo phytophthora leh iodine waa in la beddelo la processing iyada oo tincture toon.
Haddii aad aragto astaamaha dabiiciga ah ee dillaaca tamaandhada, markaa fursada ugu wanaagsani waxay noqon laheyd inaad bixiso midhaha yaanyada oo aan weli jiranayn si uu u bislaado lana soo gooyo dhakhso.
Ujeedadaas, iyada oo aanad isticmaalin kiimikooyin, xalalka milixda ee caadiga ah waa kuwo ku habboon: waxay u oggolaanaysaa in afkoda ay ka takhalusaan caleemaha saameeya sida ugu dhakhsaha badan, oo markaa siinaya baadiyaha waqti dheeri ah iyo tamar si loo dedejiyo Bisaylkiisa midhaha, iyo sidoo kale gebi ahaanba daboolaya geedka oo dhan filim cusbo, taas oo si weyn ayuu u sii socdaa horumarinta cudurka fungal. Diyaarinta waxaa loo isticmaalaa 100 g oo keliya oo cusbo ah halkii litir oo biyo ah. Waxa kale oo muhiim ah in la xusuusto in meelaha kaliya ee jiran ee dhirta la waraabin karo saline, sababtoo ah waxay dhaawici kartaa dalagyada beerta kale.
Wakhti dheer oo ah fangaska marxuumka ayaa kaa caawin doona inaad haysato kefirada caadiga ah. Si aad u falanqeyn buuxda, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso xal shaqo, kaas oo ka kooban 1 l of kefir iyo 5 litir oo biyo ah. Tamaandho leh qalabkan waa in la bilaabo inuu ku buufiyo 14 cisho kaddib marka la beero geedo ku yaal deegaan joogto ah, ka dibna macaamilka waxaa la sameeyaa horaantii toddobaad kasta.
Dhibaatada kubbada cagta, kuwaas oo hadda bilaabaya in ay soo baxaan on yaanyo, xal xashiish ah ayaa inta badan la isticmaalaa, taas oo ay leedahay hanti-jeermis xoog leh oo burburiya, marka lagu daro fungi, infekshanada kale ee saameeya dhirta. Tincture Tani waa si degdeg ah oo si fudud loo diyaariyey: 250 ml oo ash ayaa ku shubtay litir biyo ah, la kariyey dabka 15 daqiiqo. Isku darka soo go'ay ayaa si taxadar leh loo sifeeyaa, ka dibna 10 litir oo biyo ah ayaa lagu darayaa.
Hadda waa inaad ka taxadartaa xal miiraya duurka si aad u hagaajiso natiijada jeermiska: 6 litir oo ash ah ayaa si fiican loogu qasan yahay toban litir oo biyo ah, ka dibna isku dar ah ayaa istaagaya meel gudcur ah ugu yaraan saddex maalmood. Moobeyl geedo yaanyo waa in la fuliyaa 3 jeer, marka hore - marka geedo ay xidid ku yeeshaan ciidda, tan labaad - ka hor bilowga ubax, iyo saddexaad - markii ugxan-darrada hore u muuqato.
Duufaan Turka ah
Noocyada sunta ah waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido leh duurka yaanyo ee aan weli la dhibaatoonin phytophthora. Waa calaamad muujinaysa, laakiin sidaasi waxay u dhacdaa in boqoshaadu awood u yeeshaan inay u dhaqmaan sidii caqabado halis ah oo loogu talagalay horumarinta fungus kale oo waxyeelo leh, gaar ahaan walaaca soo daahay.
Noocyo yaryar oo soo socda ayaa leh iska caabin adag oo la xidhiidha phytophthora: "Katya", "Dabeded", "Dharbaax weyn", "Dubrava", "Little Hood Riding Hood", "Batyana", "Budenovka", "Gina", "Honey Drop".
Geedka waa in la waraabiyaa xilliga miro-dhiska, 10-kii maalmoodba mar hore subaxa, sida caadiga ah cimilada xasiloon iyo cimilada. Qodobka la isku diyaarinayo xalalka qulqulatadu waa sida soo socota: Musqulaha la qalajiyey (100 g) waxaa lagu jajabiyaa BooqILe hilibka oo ka buuxsamay biyo karkaraya, ka dib qaboojinta dhamaystiran, isku dar ah ayaa la soo saaraa, isla markaana xalka si dhakhso ah ayey u noqotaa isticmaalka.
Cilmi-yahannada Jarmalka ayaa la yimid qaabab xiiso leh oo loo xakameeyo cadceedda dambe: waxay ka kooban tahay nidaamka xididada geedo oo leh xarig naxaas ah oo khafiif ah. Faa'idoyinkayagu waxay ku habboonaadeen habkani sida ay u gaar ah - waxay u soo jeediyeen in ay xajiyaan astaamo sida baadiyaha ah oo leh silig caynsan. Habkani wuxuu u muuqdaa mid la yaab leh, laakiin waa wax cajiib ah: sababtoo ah microdose naxaas ah ee warshadda, chlorophyll waa mid xasilan, iyo hababka oksidative saxda ah ayaa la soo celiyaa. Laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in wax-qabadka noocan oo kale ah lagu samayn karo oo kaliya on yaanyo xoog leh afkoda.
Hannaanka barmaamijka waxaa lagu fuliyaa marxaladaha:
Telefoonka dhuuban ee khafiifka ah ayaa la jarjarey waraaqo ciid ah ama la gubay, ka dibna jarjar yar oo ah 3 cm.
Xakamaynta asliga ah waa in aan loo baahnayn ciidda, laakiin fogaan ku dhowaad 10 cm.
Telefoonka ayaa si tartiib ah loo geliyay asliga ah, darafyaduna way hoos u dhacaan.
Ku duub asliga ah waa mid aan macquul ahayn.
Nidaamka ayaa si run ah u shaqaynaya haddii aad si sax ah u sameyso oo si tartiib ah u sameyso.
Ma taqaanaa? Qofka ugu horreeya oo ogaaday in phytophthora uu ka cabsanayo naxaas wuxuu ahaa mid aan la garanayn, saxafi aan caadi aheyn (nasiib daro, magaciisa lama kaydin taariikhda). Laakiin dhab ahaan sababtoo ah kormeerkiisa, dadku waxay arkeen in fangaska dufanku uusan muujin meel u dhow miiqyada copper, ka dibna Jarmalka hadda oo naga yaqaan noo habka badbaadinta leh silig.
Marxaladda ugu horreysa, khamriga ugu caansan ee kalluunka waxuu ku fiican yahay xakamaynta dabaylo goor dambe. Mashiinka wax ku oolka ah, kaliya 100 garaam oo sheyga ah ayaa ku filan, kaas oo ah in lagu kala diro 10 litir oo biyo ah. Kadibna xalka waa in la codsadaa ujeedada loojeedo.
Muhiimada weyn ee dagaalka ka dhanka ah dabaylo goor dambe oo ku saabsan yaanyada, in lagu koriyo iyo dhulka u furan waa horudhac horudhac horudhac, kaas oo lagu fuliyaa by daaweynta dad la mid ah. Haddii aad isku daydo inaad samayso dhammaan hababkaan, waxaad awoodi doontaa inaad illowdid dab-dhalashada ugu yaraan muddo yar. Natiijo fiican, waa inaad fulisaa tallaabooyinka soo socda:
Ka hortagga waa suurad wacan in la bilaabo marxaladaha hore ee beerto: tani waa inaad u baahataa in aad ka shaqeyso abuurka qudaarta. Badanaa abuurka ayaa lagu qooyay xal xalal ah oo kalsar ah 20 ama 30 daqiiqo.
Soo qaado noocyo hore u yar oo xasaasiyad ku leh fungus.
In geedi socodka beerto geed, loo diyaariyey yaanyada, godadka waa in si ballaaran loo daweyn leh copper sulfate (1 tbsp 10 litir oo biyo ah).
U hubso masaafada u dhexeysa dhulka (ugu yaraan 30 cm).
Marka miraha buraashka ugu horreeya uu ka muuqdo duurka, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha hoose.
Si loola socdo muuqaalka kore ee duurka ubaxyada iyo burushyada - waa suurad wacan in la jeexjeexo waqtigooda.
Iyadoo lagu saleynayo xogta kor ku xusan, waxaan ka soo bixi karnaa gabagabada soo socota: Haddii aad qaadatid ka hortag wakhtiyeed ah adoo isticmaalaya iodine, toon, kaneecada iyo daawooyinka kale ee lagu taliyo phytoftora, waxay noqon doontaa boqolkiiba boqol boqolkiiba in la ilaaliyo dalagyada mustaqbalka ee dhammeystiran, iyo yaanyadaada xagaaga si buuxda u hirgelinayaan on carrada furan.